GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guambiano Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Ụmụnne Josef gara Ijipt (1-4)
Josef hụrụ ụmụnne ya ma nwalee ha (5-25)
Ụmụnne Josef lọghachikwutere Jekọb (26-38)
42 Mgbe Jekọb nụrụ na ọka* dị n’Ijipt,+ ọ gwara ụmụ ya ndị nwoke, sị: “Gịnị mere unu ji nọrọ na-ele ibe unu n’anya?” 2 Ọ sịkwara ha: “Anụrụ m na ọka dị n’Ijipt. Gaanụ ebe ahụ zụtara anyị ọka, ka anyị wee dị ndụ ma ghara ịnwụ.”+ 3 Ụmụnne Josef iri+ wee gawa ịzụta ọka n’Ijipt. 4 Ma Jekọb ekweghị ka Benjamin,+ nwanne Josef, soro ụmụnne ya ndị nke ọzọ gaa, n’ihi na ọ sịrị: “Ihe nwere ike ime ya, ya anwụọ.”+ 5 Ụmụ Izrel* wee rute Ijipt, ha na ndị ọzọ bịara ịzụ ihe oriri, n’ihi na ụnwụ ahụ ruru Kenan.+ 6 Ọ bụ Josef bụ onyeisi n’Ijipt,+ ọ bụkwa ya na-eresị ndị si n’ebe niile n’ụwa ọka.+ N’ihi ya, ụmụnne Josef bịara hulata kpọọrọ ya isiala.+ 7 Mgbe Josef hụrụ ụmụnne ya, ọ matara ha ozugbo, ma o mere ka ha ghara ịmata ya.+ N’ihi ya, o ji olu ike gwa ha okwu, sị ha: “Ebee ka unu si bịa?” Ha sịrị ya: “Anyị si Kenan bịa ka anyị zụrụ ihe oriri.”+ 8 Otú ahụ ka Josef si mata ụmụnne ya, ma ha amataghị ya. 9 Ozugbo ahụ, Josef chetara nrọ ndị ọ rọrọ banyere ha.+ O wee gwa ha, sị: “Unu bụ ndị nnyopụta! Unu bịara ka unu chọpụta ebe ndị unu nwere ike isi bata lụso anyị agha.” 10 Ha wee sị ya: “Mba, onyenwe anyị, kama ndị ohu gị bịara ịzụ ihe oriri. 11 Ọ bụ otu nwoke mụrụ anyị niile. Anyị na-akwụwa aka ọtọ. Ndị ohu gị abụghị ndị nnyopụta.” 12 Ma ọ sịrị ha: “Ọ bụghị eziokwu! Unu bịara ka unu chọpụta ebe ndị unu nwere ike isi bata lụso anyị agha.” 13 Ha sịziri ya: “Ndị ohu gị dị ụmụnne iri na abụọ.+ Ọ bụ otu nwoke bi na Kenan mụrụ anyị niile.+ Nwanne anyị nke ọdụdụ na nna anyị nọ ugbu a,+ ma onye nke ọzọ anọghịzi.”+ 14 Ma Josef sịrị ha: “Ihe m gwara unu bụ otú ọ dị. ‘Unu bụ ndị nnyopụta.’ 15 M ga-eji ihe a nwalee unu: Eji m Fero aṅụ iyi na unu agaghị esi ebe a laa, ọ gwụla ma nwanne unu nke ọdụdụ ọ̀ bịara ebe a.+ 16 Zipụnụ otu onye n’ime unu ka ọ gaa kpọta nwanne unu, ma a ga-akpọchi unu. M ga-esi otú a mara ma ùnu na-ekwu eziokwu. Ma ọ bụrụ na unu emeghị ihe a, eji m Fero na-aṅụ iyi, na-agwa unu na unu bụ ndị nnyopụta.” 17 O wee tụba ha n’otu ụlọ mkpọrọ ruo ụbọchị atọ. 18 N’ụbọchị nke atọ, Josef gwara ha, sị: “Meenụ ihe a ka unu wee dịrị ndụ, n’ihi na m na-atụ egwu Chineke. 19 Ọ bụrụ na unu na-akwụwa aka ọtọ, ka otu n’ime ụmụnne unu nọrọ n’ụlọ ebe a kpọchiri unu. Ma ndị nke ọzọ n’ime unu nwere ike ịga buru ọka bulaara ndị ezinụlọ unu ụnwụ na-akpa aka ọjọọ.+ 20 Unu ga-akpọtaziri m nwanne unu nke ọdụdụ, ka unu wee gosi na ihe unu kwuru bụ eziokwu, unu agaghịkwa anwụ.” Ha wee mee otú ahụ. 21 Ha gwara ibe ha, sị: “O doro anya na ọ bụ n’ihi nwanne anyị nwoke ka e ji na-ata anyị ahụhụ,+ maka na anyị hụrụ otú o si na-ewute ya mgbe ọ na-arịọ anyị ka anyị meere ya ebere, ma anyị egeghị ya ntị. Ọ bụ ya mere nsogbu a ji bịara anyị.” 22 Ruben wee gwa ha, sị: “Ọ̀ bụ na mụ asịghị unu, ‘Unu emela nwata ahụ ihe ọjọọ,’* ma unu egeghị m ntị?+ Ugbu a, anyị na-aza ajụjụ maka ọbara ya.”+ 23 Ma ha amaghị na Josef ghọtara ihe ha na-ekwu ebe ọ bụ na e nwere onye na-asụgharị ihe ha na-ekwu. 24 Josef sizi n’ebe ha nọ pụọ wee malite ibe ákwá.+ Mgbe ọ lọghachiri, ya na ha kwuru okwu ọzọ, ya akpọrọzie Simiọn+ kee ya agbụ n’ihu ha.+ 25 Josef nyere iwu ka e kpojuo ọka n’akpa ha, ka e tinye ego onye nke ọ bụla n’ime akpa ya, nakwa ka e nye ha ihe ha ga-eri n’ụzọ. E meere ha otú ahụ. 26 Ha wee bukwasị ọka ha n’elu jakị ha, si n’ebe ahụ lawa. 27 Mgbe otu onye n’ime ha meghere akpa ya n’ebe ha ga-arahụ ka o nye jakị ya nri, ọ hụrụ ego ya n’ọnụ akpa ya. 28 O wee gwa ụmụnne ya, sị: “E weghachiri ego m. Ọ dị n’akpa m!” Obi wee wụnye ha n’afọ, ahụ́ mawakwara ha jijiji, ha asị ibe ha: “Gịnị bụ ihe a Chineke mere anyị?” 29 Mgbe ha lọghachikwutere Jekọb nna ha na Kenan, ha kọọrọ ya ihe niile mere ha. Ha sịrị ya: 30 “Onyeisi obodo ahụ ji olu ike gwa anyị okwu.+ Ọ sịkwara na anyị bịara inyopụta obodo ahụ. 31 Ma anyị gwara ya, sị, ‘Anyị na-akwụwa aka ọtọ. Anyị abụghị ndị nnyopụta.+ 32 Anyị dị ụmụnne iri na abụọ.+ Ọ bụ otu nna mụrụ anyị. Otu onye anọghịzi.+ Nwanne anyị nke ọdụdụ na nna anyị nọkwa ugbu a na Kenan.’+ 33 Ma onyeisi obodo ahụ sịrị anyị, ‘M ga-eji ihe a mara na unu na-akwụwa aka ọtọ: Hapụnụ otu nwanne unu ka mụ na ya nọrọ.+ Burunụ nri lawa ka unu bulaara ndị ezinụlọ unu ụnwụ na-akpa aka ọjọọ.+ 34 Kpọtaranụ m nwanne unu nke ọdụdụ, ka m wee mara na unu abụghị ndị nnyopụta, kama na unu na-akwụwa aka ọtọ. M ga-akpọnyezi unu nwanne unu, unu ga na-azụrụkwa nri n’ala a.’” 35 Mgbe ha na-ewepụtasị ihe dị n’akpa ha, ego onye nke ọ bụla dị n’akpa ya. Mgbe ha na nna ha hụrụ akpa ego ha, egwu tụwara ha. 36 Jekọb nna ha tiri mkpu, sị ha: “Ọ bụ m ka unu na-agbawa aka ụmụ!+ Josef anọghịzi.+ Simiọn anọghịzi,+ unu chọkwara ịkpọrọ Benjamin! Ọ bụ m ka ihe a niile na-eme!” 37 Ma Ruben gwara nna ya, sị: “I nwere ike igbu ụmụ m abụọ ma ọ bụrụ na mụ akpọghachighịrị gị ya.+ Nyefee m ya n’aka. M ga-akpọghachitere gị ya.”+ 38 Ma, Jekọb sịrị: “Nwa m agaghị eso unu gaa, n’ihi na nwanne ya nwoke anwụọla. Ọ bụ naanị ya fọrọ.+ Ọ bụrụ na ihe emee ya n’ụzọ, ya anwụọ, unu ga-eme ka m rugide uju+ n’isi awọ́ m nwụọ.”+
^ Na Hibru, “emehiela nwata ahụ.”